नेपाललाई मिल्यो ऐतिहासिक सफलता : पहिलोपटक अन्तरिक्षमा पठायो आफ्नै भू-उपग्रह ! « Janaboli
नेपाललाई मिल्यो ऐतिहासिक सफलता : पहिलोपटक अन्तरिक्षमा पठायो आफ्नै भू-उपग्रह !
काठमाडौं । ऐतिहासिक महत्वको रुपमा रहेको नेपालको पहिलो अन्तरिक्षयात्रा सफल भएको छ । नेपालले पहिलो पटक आफ्नो भू–उपग्रहलाई अन्तरिक्षमा पठाएको छ । जापानको क्युसु विश्वविद्यालयले क्युसु इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (क्यूटेक)बाट स्पेस टेक्नोलोजीमा इञ्‍जिनियरिङ गरिरहेका आभाष मास्के र इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियरिङमा स्‍नातकोत्तर गरिरहेका हरिराम श्रेष्ठको पहलमा जापानको ‘बर्ड–३’ परियोजनाअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपाली समयनुसार आज बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा ‘नेपाली क्यूबसेट स्याट–१’ नामको भूउपग्रह प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपालीस्याट–१ नामक उक्त भूउपग्रहमा नेपालको झण्डाका साथै नाष्टको प्रतीकचिह्न अंकित रहेको जनाइएको छ । नेपाली युवा वैज्ञानिकले बनाएको भूउपग्रह नेपालको आकाशमा दैनिक ५ देखि १० मिनेटसम्म रहने भएको छ । तपाईलाई जानकारी गराउँ नेपालसँगै श्रीलंकाको ‘रावण–१’ र जापानको ‘यु–बिसु’ भू–उपग्रह पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । देशका विभिन्न स्थानका तस्वीर संकलन तथा अभिलेखीकरण गर्नाका साथै यहाँको हिमाल, पहाड, तराई वन, पाखा, हिमनदीका बारेमा सूचना र जानकारी प्रवाह गर्ने काम गर्छ ।
नेपालले पहिले आफ्नो भु–उपग्रह नहुँदा विदेशीहरुको प्रयोग गर्दै आएको थियो अब नेपाल आफैंले गर्न सक्ने भएको हो । नाष्टले भू–उपग्रहको सूचना लिनका लागि आफ्नै कार्यालयमा ग्राउण्ड स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । स्टेशन निर्माणका लागि हाल २१ दिने सूचनासहितको बोलपत्र आह्वान गरिएको नाष्टले जनाएको छ । जाक्साले नाष्टलाई ९५ प्रतिशत सम्भावना भएको प्रविधिका साथै १०० प्रतिशत क्षमता भएको अर्बिटमा छाड्ने दर उपलब्ध गराइसकेको बताइएको छ । ग्राउण्ड स्टेशनको एण्टिनाको दिशाले समस्या नपारेमा भूउपग्रहबाट छिट्टै जानकारी पाउन सकिनेछ ।